Famaritana mivoaka amin'ny Sony Xperia 20 manondro ny Snapdragon 710 | Androidsis
Tamin'ny faran'ny volana febroary dia nanolotra ny elanelam-potoana vaovao i Sony, izay misy ny Xperia 10 sy 10 Plus. Ireo finday roa ireo dia natolotra niaraka tamina processeur Snapdragon 63X, ka izany no nihoaran'ny terminal terminal antonony maro hafa eny an-tsena.
Na izany aza, ny mpandimby azy ireo, ny Sony Xperia 20, dia hampitaovana zavatra matanjaka kokoa, tsy misy fisalasalana. Ny famoahana vaovao izay lazainay etsy ambany dia manolotra an'io, ary ireo sary namboarin'izy ireo, izay naseho etsy ambony ary nipoitra teo aloha, dia milaza amintsika ny zava-drehetra mety hisehoan'ny fitaovana.
Araka izany sumhoinfo, ny loharanom-baovao, Ny Sony Xperia 20 dia miaraka amin'ny efijery LCD 6-inch miaraka amin'ny vahaolana FullHD + sy ny tahan'ny lafiny 21: 9, toa ilay Xperia 10 voalaza etsy ambony sy ny Xperia 1fa toa tsy mbola hanana famolavolana izy io. Ity kosa dia hampiasa a Snapdragon 710, ilay chipset Qualcomm izay mihoatra lavitra ny Snapdragon 630 sy 636 hita ao amin'ny Xperia 10. Ho an'ireto farany dia milaza izahay fa hisy fandrosoana lehibe eo amin'ny lafiny heriny sy ny fahombiazany.
Sony Xperia 20 Fomba fiarahana mivoaka
Mifanaraka amin'ny asan'ny SoC, RAM 4 sy 6 GB misy habaka fitehirizana anatiny 64 sy 128 GB, no hananantsika. Tsara homarihina ihany koa ny rafi-tsary any aoriana, izay misy sensor 12-megapixel roa. Ny eo anoloana, etsy ankilany, dia manana banga izay tsy nisy voalaza mazava.
Ny zavatra farany izay amin'ny antsipiriany dia ny ananany refin'ny 158 x 69 x 8.1 mm, na dia tsy voalaza aza ny lanjany. Ity angona ity sy ny hafa dia tsy maintsy hamafisin'ny orinasa amin'ny ho avy, na amin'ny famoahana hafa. Na izany aza, mandra-pahatongan'ny fisehoana ofisialy na marina, ny zavatra rehetra miseho, amin'izao fotoana izao, dia tsy maintsy sokajiana ho vinavina fotsiny. Mbola hitady izay vaovao rehetra ihany anefa isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny spektera Sony Xperia 20 vaovao dia mipoitra manondro ny Snapdragon 710 ho toy ny SoC
LG dia nitodika tany amin'ny BOE mpamokatra ho an'ny fampisehoana smartphone OLED